Vaovao - Inona no atao hoe filtration mofomamy na filtration tetezana amin'ny lamba sivana amin'ny milina fanontam-pirinty?
Inona no atao hoe filtration mofomamy na filtration tetezana ny lamba sivana amin'ny sivana milina?
Araka ny fantatsika, amin'ny fisafidianana ny lamba sivana mety, dia tsy maintsy manambatra ny angona vahaolana miaraka amin'ny lamba sivana.
Raha ny hakitroky ny lamba sivana dia avo loatra, izay mety hahatonga ny Output kely kokoa sy ny fiantraikany ny fahafahan'ny sivana milina fanontam-pirinty, izay mety hitarika ho amin'ny tsy mahazo ny sivana mofomamy amin'ny sasany hamandoana afa-po amin'ny fotoana iray, ny sasany aza tsy afaka mahazo. ny mofomamy ary ho slurry fanjakana foana.
Raha ambany loatra ny hakitroky ny lamba sivana, izay mety hiteraka olana mitete mazava ho azy.
Raha rehefa misafidy ny lamba sivana mety isika, fa maninona no toy ny mahazatra ny filtrate dia mbola maloto hatrany am-piandohana rehefa nosoloina ny lamba sivana vaovao?Ary ity trangan-javatra ity dia mitranga matetika indrindra ho an'ny fitsaboana vahaolana amin'ny potikely.
Satria amin'ny dingana voalohany, ny fitaovana sivana ihany no afaka manangona ireo poti-javatra manana habe lehibe kokoa noho ny habeny misokatra, noho izany dia handalo ireo potikely kely kokoa ary maloto ny filtrate, izay mila miverina amin'ny fiverimberenan'ny sakafo.
Saingy rehefa mihamaro ny poti-javatra voangona, dia hisy sosona mofomamy eo anelanelan'ny vahaolana vaovao sy ny lamba sivana izay afaka manampy amin'ny filtration, ity tranga ity antsoina hoe filtration tetezana na filtration mofomamy.Rehefa afaka fotoana fohy, ny filtrate dia hanadio, dia afaka mahazo ny tsara sivana mofomamy araka ny nangatahana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny vahaolana amin'ny sivana, na lamba sivana na milina fanivanana, aza misalasala mifandray amin'ny Zonel Filtech!